Peter M. (avy amin'ny rahavavy mahatoky mankany Jeroen Pauw) dia nosamborina indray: Martin Vrijland
Peter M. (avy amin'ny rahavavy mahatoky mankany Jeroen Pauw) dia nosamborina indray
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 6 June 2019	• 3 Comments
Mamela vehivavy iray manana ny toetra ilaina mahomby 10 minitra Jeroen Pauw eo amin'ny latabatra ary ny mponin'i Holanda rehetra dia resy lahatra fa i Peter M. noho ny tsy fisian'ny oksizenina amin'ny fahaterahana dia nanjary sahiran-tsaina ka te hanao ny zavatra rehetra amin'ny reniny tsy misy fanafody. Fa ny anabaviko dia mitsidika an'i Petera saika isan-kerinandro, satria tsy misy zavatra hafa manelingelina ny fifandraisany amin'i Peter taorian'ireny fandrahonana rehetra natao tamin'i Mama ireny. Tsy mahagaga anao ve izany? Eny, rehefa midina amin'ny fampidirana fitsipika vaovao izay tsy hanaiky na oviana na oviana raha tsy misy izany rehetra izany (azo atao). Noho izany i Peter M. dia araka ny filazan'ny media nijanona indray (farafaharatsiny izay mahatonga ilay tantara ho azo itokisana kokoa).
Eritrereto hoe ity ramatoa ity sy ny "adala rahalahiny" no nahazo ny volavolan-dalàm-bola mba handraisany anjara amin'ny lalàna amam-pitsipika henjana indrindra amin'ny fanjakana, dia tsy vitan'ny hoe nahazo vola fotsiny i Jodas, fa te hanao izany koa ny mpandidy azy. .
Tsy voatery ny Rahalahy Peter, satria ny saripika sy ny lahatsary dia afaka mifototra amin'ny rahavavy ary noforonina tamin'ny alalan'ny rindrambaiko lalina. Na izany aza, dia lasa lavitra loatra ny teknolojia ka na ny anabavin'i Peter aza dia mety ho tsy fantatry ny sisa tavela amin'i Holandy, satria ny tarehiny dia azo tanterahana amin'ny fotoana rehetra eo amin'ny latabatr'i Jeroen Pauw amin'ny alàlan'ny takelam-bolana iray. Fahitalavitra izany ary noho izany dia tsy fantatrao intsony izay hitanao (araka ny hazavaina ity lahatsoratra ity). Avy amin'ny minitra 19e ao amin'ny Peacock mivantana Ny Pauw dia maneho tsy misy fiheverana na fitenenana ny fomba ananany karazana rindrambaiko rehetra ao amin'ireo trano fandraisam-bahiny any, mba hahatonga ny olona hibanjina azy, ohatra. Amin'io fotoana io dia mikasika ny vanim-potoanan'ny fisotroan-dronono vaovao i Jeroen ary avy eo dia mitondra sary misy latabatra sasantsasany, izay mampiseho ny fomba fijerin'izy ireo ny taona fisotroan-dronono.
Ny TV studios, John de Mol sy ny ANP dia manana ny rindrambaiko azonao eritreretina ary nahoana izy ireo no tsy hampiasa azy ireo hamitaka ny vahoaka? Heverinao ve fa ratsy loatra izany? Avy eo dia tandremo ny fepetra haverina amin'ny fotoana ho avy. Ny fandosiran'i Peter M. dia ho azo antoka fa tsy misy safidy intsony ny fialàn'ny fialan-tsasatra ary ny fianakaviany dia hanapa-kevitra avy hatrany amin'ny fanapahan-kevitra hisambotra olona iray, nafenina tamin'io fahavoazana io. Ary mazava ho azy fa tsy maintsy nanamafy indray ny tantaran'i Anne Faber. Ankoatra izany, mazava fa hatramin'izao dia tsy maintsy miverina an-tranomaizina tsotra izao ny toeram-pitsaboana. Vakio ianao eto indray ahoana ny amin'ireo trangana famonoana goavana isan-karazany (fiasa ara-psikolojika) tokony hitarika amin'ny fanovana vaovao ara-dalàna ary inona marina.
Ireo tranga lehibe rehetra izay heverin'ny haino aman-jery amin'izao fotoana izao dia manana dingana roa ary ny iray amin'ireo ambadiky ny roa ireo dia tokony ho lasa mpamadika goavana ho an'izay rehetra tsy hita (tsy misy) ny app Sherlockmaneho). Izany dia mety ho tanora ihany koa no miasa amin'izany fitondrana henjana Maro no manandrana mandositra ny andrim-pikarohan'ny tanora ary mety ho olona izay tsy ho ela dia hanjavona fotsiny amin'ny maha-mpanohitra azy ao amin'ny gulag, maro no tsy hanelingelina. Ny famadihana dia lasa karazana fihodinana fihaza Pokémon. Ny olona dia voasarona amin'ny fampisehoana amin'ny fampitam-baovao izay manome ny fahatsapana fa manompo tsara ny rehetra. Ny fampidinana ity app ity dia manome ny zon'ny mpiasa manontolo ny mampiasa ny fakantsarinao, ny mikrôfo ary ny toerana misy ny toerana, mba hahatonga anao ho ara-dalàna ihany koa, saingy ankoatra izany.
Mandritra izany fotoana izany, ireo rehetra izay mizara ny lahatsoratra ao amin'ny Facebook dia hosihan'ireo horonam-panjakana milaza ny maha-namana, ny olom-pantany, ny fianakavian'ny mpandray anjara, mba hanakanana ireo izay mizara ireo lahatsoratra sy ny fitazonana ny asa. Ao ambadik'ireny haino aman-jery sosialy ireny dia matetika ny Inoffizieller mpiara-miasa na miresaka amin'ny mpiasan'ny AIVD izay miafina ao ambadiky ny profesora lalina (mifandraika amin'ireo profo fonofy hafa, mba hahazoana tambajotra sosialy azo itokisana toy izany). Ny fahasamihafan'ny fanafihana dia maneso tokoa ka maro ny olona tsy sahy miresaka na mitady lahatsoratra. Aza mipetra-potsiny!
Lisitry ny rohy loharano: telegraaf.nl
Mitady fatratra ny mpikaroka ao amin'ny PBS, avy any Den Kolder
Tags: ny, dolder, Featured, hita, hita, Jeroen, toeram-pitsaboana, M., marary, peacock, Peter, aretin-tsaina, indray, fampitana, rahavavy
7 June 2019 ao amin'ny 08: 47
Afaka milaza amiko ve aho hoe nahoana no lazaina fa an-telefaona an-tsitrapo ilay anabavy mipetraka ao Peter M.? Amin'ny ankapobeny, ny olon-drehetra dia tsy te-hiditra amin'ny fahitalavitra raha toa ka mangataka ny mombamomba azy ny mpianakavy iray. Afaka milaza ve aho hoe maninona i Peter M. no mampidi-doza ary tsy afaka miasa fa tsy mamoaka fanafody? Iza no anaran'ny dokotera mitsabo azy? Efa niasa tamin'ny fahitalavitra ve izy tamin'ny fanjakana Pauw mba hanazava? Tsy dokotera toy izany ve no notsipihina na notsipihina?
Firenena mahatsiravina sy mihatsaravelatsihy ve ity? Alefaso miaraka amin'ireo lehilahy avy ao amin'ny script asap.
7 June 2019 ao amin'ny 09: 03
Mazava ho azy fa tantara tsy hay hadinoina izany. Olona iray izay tsy afaka miasa fa tsy misy fanafody izay nomena fitsarana dia miala indray mba hiara-hiombon'antoka.
Tsy misy dikany mihitsy izany.
Ooh eny ary avy eo ny tantaran'io "baomba atomika" io. Mazava ho azy fa izy no izy.
Miaraka amin'ny tantara mihetsi-po lalindalina kokoa izy ireo ary tafiditra ao anatin'izany ireo olona ireo satria misy olona milaza tantara iray amin'ny poker Jeroen Pauw ary ny mpitsidika latabatra dia mpandainga matihanina manamarina ny tantara.
7 June 2019 ao amin'ny 10: 22
Zavatra mahagaga, tsy mampino. Tsy mazava ny toerana misy ahy sy hoe hafiriana i Peter M. no nijanona hatramin'ny nisamborana azy. Sa efa nampiseho azy ny lalana tokony haleha? Inona no nihinana sy nisotroany? Tsy misy hanoanana, hetaheta, fampiasana? Izany ve no karama? Manana ny bikany ve izy? Nahoana? etc.
« Mitady fatratra ny mpikaroka ao amin'ny PBS, avy any Den Kolder
Azonao atao ny mitondra fiovana ary zava-dehibe ny safidinao! »
Total visits: 12.196.672
Rahoviana i Etazonia no mandoa hetra amin'ny toetr'andro amin'ireto baomba ireto dia alain'izy ireo?
Ny NOS sy RTL dia mandinika tsara ny ala lalina mba hamonosana ny vokariny lalina
Afaka mamorona ny korontana any Eropa izay hanangana ny fanjakana Ottoman ve i Boris Johnson (razamben'i Ottoman)?
Martin Vrijland op Fiantsoana maika! Mila mametraka ny haino aman-jery amin'ny hetsika isika ankehitriny!
Camera 2 op Fiantsoana maika! Mila mametraka ny haino aman-jery amin'ny hetsika isika ankehitriny!
Fakafakao op Fiantsoana maika! Mila mametraka ny haino aman-jery amin'ny hetsika isika ankehitriny!
ZalmInBlik op Asa ve ao anaty ny 911? De Telegraaf dia mamaly ny fanontanianao rehetra!
Zandi Eyes op Asa ve ao anaty ny 911? De Telegraaf dia mamaly ny fanontanianao rehetra!
Mifandraisa anjara amin'ny 1.634 hafa